कोरियाबाट पठाएको ८० लाख लिएर श्रीमती सम्पर्क बिहिन, श्रीमान कोरियाबाट रुँदै यसो भन्छन (भिडियो) – Nep Stok
माघ २४, २०७८ सोमबार 231
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेश जानू अहिले घरबार बिगार्नु जस्तै भैसकेको छ। घर परिवारलाई राम्रोसगँ पालनपोषण गर्ने सोचले बिदेश गएका कतिपयको न परिवार हुन्छ न त कमाएको सम्पत्ति नै रहन्छ ।
यस्तै घटना छ भोजपुर जिल्लाको साङ्पाङ गाविस वडा नं २ निवासी पुष्प बहादुर सुनुवारको। उनी अहिले दक्षिण कोरियामा छन। उनी वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया गएको ठ्याक्कै साढे ३ बर्ष पुगेको छ । ५ बर्ष अघी पुष्प बहादुर सुनुवार भोजपुरकै टक्सार गाविस वडा नं ६ का रमिना श्रेष्ठसँग विवाह बन्धनमा बाधिएका हुन। दुवैको परिवार खुशी नै थिए। तर अहिले उनकी श्रीमती रमिना श्रेष्ठ सम्पर्कविहिन भएको २ महिना भएको छ। ५ बर्षिय छोरा साथमा रहेको उनी अहिले कहाँ छिन थाहा पत्तो छैन।
पुष्पकी श्रीमती रमिनाले यस अघि बस्दै आएको काठमाडौको गौरिघाटस्थित रहेको डेरा समेत परिवर्तन गरेछन् । पुरानो डेरा सारेपछि उनी ललितपुरको ठाइबास्थित बसेको जानकारी पाइयो तर अहिले भन्ने पुष्प मात्रै होइन पुष्पका आफन्तलाई समेत पत्तो छैन उनी कहाँ छिन् भन्ने कुरा ।
तर यता श्रीमती रमिनाको माइती पक्षका आफन्तले भने थाहा नभएको भन्दै रमिनाबारे बोल्न चाहिरहेको देखिदैन । पुष्पले सकेसम्मको तरिका अपनाए तर श्रीमती सम्पर्कविहिन भएपछी उनी चिन्तामा छन । उनका आफन्त र चिनजानकाहरुसँग बुझ्न खोजे पनि कसैले केही चासो लिएको छैन ।
पुष्पकी श्रीमतीको भाइ र बहिनीलाई ऋणस्वरुप पठाएको पैसा पनि फिर्ता पाउन सकेको छैन । माइती पक्षले भने पुष्पको फोन कल ब्लक लिस्टमा राखेको बताए । उनले फोनमा अन्य परपुरुषसंग बोलेको देखेपछि र स्वयं उनकी श्रीमतीले नै आफ्नो ट्याक्सी ड्राइभर ब्वाइफ्रेण्ड रहेको बताएकी थिइन । श्रीमान विदेश गएको ६ महिनापछी आफु रिलेशनमा रहेको र साँढे २ बर्ष भैसकेको कुरा उनकी श्रीमतीले बताएकी थिइन । त्यसपछी रमिनाले आफ्नो श्रीमान पुष्पसँग माफि मागिन । माफि पनि दिए तर पटक पटक आफुसँग नबोल्ने र त्यही केटाको याद आइरहेको बताउँदै आइरहेकी थिइन । पुष्प पिडाले छट्पटिन्थे र श्रीमतीको माइतीलाई भएको समस्या समाधान गर्न पटक पटक भनिरहन्थे । पुष्प आफ्नो श्रीमतीको टचरकै कारण आत्माहत्या गर्नसम्म पुग्नै लागेका थिए । चाबहिल, ललितपुरका गेस्ट हाउसमा आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डसँग कयौ रात बिताएको समेत उनकी श्रीमतीले बताएकी थिइन । उनीहरुबिच विवाद हुँदै गयो ।
रमिनाले निर्धक्कसँग म्यासेन्जरमा स्कृन सेअर गरेर पुष्पलाई परपुरुषसँंग बोलेको अनेकथरी म्यासेज देखाउथिन । रमिनाले आफ्ना आफन्तले परपुरुषसँग सम्बन्ध नगाँस्न बारम्बार भनेकी समेत पुष्पले बताए ।पुष्पले आफ्नी श्रीमतीलाई सम्झाउन आफ्ना आफन्त पनि पठाए । तर पनी केही भएन । उनै रमिना आफू माथि हुने कुरा गरे र उल्टै आफ्ना श्रीमानलाई दोष थुपार्दै पन्छिन खोजे । पुष्पको आफन्तलाई उनकी श्रीमती रमिनाले बढी शंका गर्ने गरेको र झगडा भएको बताइन । पुष्पको आफन्तले दुवैलाई मिलेर बस्नु भने । पुष्पले सम्झाउन कोशीस गरे, बुझाउन अनेक गरे तर उनकी श्रीमती रमिनाले अनेक बहाना बनाएर निहुँ निकालेर झगडा गरीरहिन । उनै पुष्पलाई बेला बेलामा माफि माग्दै पैसा पठाउन लगाइरहन्थिन । तर उनकी श्रीमती रमिना भने आफुले पठाएको पैसा लिएर ब्वाइफ्रेण्डसँग घुमिरहेको थाहा पाएपछी उनलाई पुष्पले सोध्ने गर्दथे, मेरो र छोरालाई कमसेकम बुझ्नुहोस ।
तपाईं किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ? तर झन आफ्नी श्रीमतीले छोरा समेत पुष्पको नभएको बताएपछी पुष्पलाई झन के गरौ के नगरौको स्थितिमा पुगे। डेढ बर्ष अघी पुष्पले पठाएको करिब ८० लाख रुपैयाँमध्ये ५३ लाखले यता पुष्पकी श्रीमतीले जग्गा लिए र उनको नाम पास गरिन। पुष्पले सबै कुरा थाहा पाएपछी आफ्नो सम्पती र छोरा फिर्ता मागे। अनी श्रीमती रमिना सम्पर्कबिहिन बनिन । पुष्प न्यायको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन हामी माझ आइपुगेका छन। पुष्पले आफ्नी श्रीमतीको खोजिकार्य गरिदिन आग्रह गरेका छन। आफ्नो सम्पती र छोरा फिर्ता गर्न गुहारेका छन । यदी तपाईले पनि रमिना श्रेष्ठलाई देख्नु भएको छ भने नजिकैको प्रहरी कार्यालय या यो नम्बरमा संपर्क गर्नुहोला। साथै हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला ।पुष्पलाई परेको यो समस्या त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । यी र यस्तै घटना भोगिरहेका धेरै जना छन। पुष्पले भ्याएस्म्मका तरिका अपनाएर श्रीमती रमिनालाई खोजेपनी भेट्न नसकेपछी हामी माझ आएको घटना हो यो। यो समाचार उज्यालो नेटवर्कमा प्रकाशित छ। भिडियो धनसन्चारबाट
Prevयी अभागी बाबु, एकै दिन एउटी छोरिलाइ डोली चढाएर पठाए, अर्की छोरीलाइ घाटमा लगेर दाहसंस्कार गरे (भिडियो सहित)
Nextअस्पतालवाट सार्वजनिक भयो लताको अन्तिम तस्बिर, यस्तो देखिएकी थिइन् अन्तिम अवस्थामा
सावधान! सावधान!! सावधान !!!भक्तपुरको एकै क्षेत्रका ११ जनामा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दियो यस्तो निर्देशन
अब भोलि देखि पुराना मोबाइलले काम नगर्ने
पल शाहले सहमतिमा नै स’म्ब’न्ध राखेको भएपनि उमेरका कारण ब’ला’त्कार, १२ वर्ष कैद सजाय : प्रहरी